Zvishandiso zvine kubata kwoumbozha - Fenicha - kurudziro
Furniture - kurudziro
Masofa emhando yepamusoro
Masofa emazuva ano
Mukamuri rekugara madziro
Yakasimudzwa mibhedha miviri
Mabhedha muimba yevana
Mazuva ano mabhokisi emadhirowa
Dzimba dzekurara dzemazuva ano
Mibhedha yevana neyekuwedzera mubhedha
Chairs yekamuri yevana
Zvishandiso zvine kubata kwoumbozha
Gumiguru 14, 2018 Kukadzi 16, 2021 arun Kuronga sei?
Kana iwe uchitsvaga anonakidza dhizaini zvidimbu zveimba yako, tenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro. Chitarisiko chayo chakasarudzika chinosimudzira mamiriro ezve chero zvemukati.
Dhizaini yemidziyo dhizaini
Fenicha yakasarudzika inosanganisa zvakajairika dhizaini uye mhando. Vagadziri vayo vanowanzo tarisa kune zvakapfuura kufemerwa. Ichi chimiro ndechimwe chevaya vanoita fenicha yemhando yepamusoro kuti inakidze. Inounza musanganiswa wezvinhu zvazvino uye zvezvakaitika kare. Mumusika unogona kuwana zvidimbu zveumbozha mumarudzi akasiyana. Zviri kwauri kana iwe ukasarudza fenicha mune yakapfava mumvuri, fanicha yakashongedzwa negoridhe kana sirivheri vara kana fenicha inoputika nemusanganiswa wemazuvano, ane mavara shades.
Hunhu hwemhando yepamusoro
Pamutengo unonzwisisika, mhando yemidziyo yemhando yepamusoro inokurawo. Zvinhu zvemhando yepamusoro zvinoshandiswa mukugadzirwa kwayo. Midziyo yakasarudzika inogadzirwa nematanda akaomarara, simbi, machira emhando yepamusoro uyezve nedehwe rechisikigo.
Zvidimbu zvinoshamisa zveimba yako
Nekutenga fenicha yemhando yepamusoro, unogona kutenga zvakasarudzika dhizaini zvidimbu. Iyo yemukati yakarongedzwa nemhando yepamusoro fenicha inotaridzika chaizvo yekutanga. Inomira zvakakwana mune chero nzvimbo. Muimba yekutandarira unogona kuuya nesofa remhando yepamusoro, chipfuva chemadhirowa, zvituru, tafura nebhenji rine mawrestrests. Mubhedha woumbozha, wadhiropu uye masherufu unit zvinomira zvakanaka mukamuri yekurara. Dhizaini repamusoro uye cheya chemaoko zvinowedzera kunaka kutsva kuhofisi yako. Unogona kudya patafura yemhando yepamusoro mudining. Zvigaro zvepamusoro zvinokuvimbisa kugara kwakanaka. Muimba yekupinda, hanger yekugadzira uye girazi mune rakakura furemu rinomira zvakanaka.
Midziyo yemhando yepamusoro inosanganisira zvinhu zvepamusoro
Usakanganwa nezve zvishongedzo. Kana ukasarudza fenicha yemhando yepamusoro ine dhizaini yezvakaitika kare, tenga mabhuku ekare, zvidhori kana vhasi. Zvinhu zvehunyanzvi hwazvino zvinoenda zvakanaka nefenicha yemhando yepamusoro ine dhizaini yazvino. Dhizaini makapeti zvakare ari akakosha ekuwedzera kune yakasarudzika fenicha. Parizvino, matahwe ematehwe kana kapeti ane murwi murefu anozivikanwa kwazvo.
Iwe uchawana sarudzo yemidziyo yakasiyana yeimba yako kumutengesi HERE.
Kicheni kuimba yekugara
Uri kutsvaga kurudyi madziro hanger? Kwete dambudziko!
Akanyanya kufarirwa zvinyorwa
Matafura ekicheni nemacheya Chivabvu 29, 2020
TOP 5: Iyo yakanakisa mibhedha miviri ye2018 kusvika ku500 euros Mbudzi 20, 2017
TOP 5: Iwo akanakisa ehupenyu madziro e2018 kusvika ku400 mauro Mbudzi 20, 2017
TOP 5: Iyo yazvino gadheni gadheni fenicha ya2018 Mbudzi 20, 2017
Inopenya Dingindira na Ruvara dzinofambiswa ne WordPress